Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal Saadaalin: Mustaqbalka dhaw ee Itoobiya waa Shul & Shal midkood, By- Xaaji M/rashiid.
Maqaal Saadaalin: Mustaqbalka dhaw ee Itoobiya waa Shul & Shal midkood, By- Xaaji M/rashiid.
Posted by Wariye Qaran	/ April 16, 2018
Marka hore akhristoow si aad u fahanto labada Eray ee kala ah shul iyo shal iyo guud ahaamba nuxurka saadaasha dalka laga dayrinayo sii jiritaankiisa ee Itoobiya, waxaa lagaaga baahanyahay dulqaad iyo deganaan. Sidaynu lawada socono maamulaha dhabta ah ee dunidu waa Allaah SWT, waana sida uu naska Qur’aanka ahi cadeynayo-قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاءٌAlloow adigaa boqornimada iska leh, cidaad doonto waad siisaa, cidaad doontana waad kaqaadaa, cidaad doonto sharaf baad uyeeshaa, cidaad doontana waad dullaysaa, waa micnaha aayaddu cabirayso. Hadaba hadii xaalku sidaas yahay waa inaan ku baraarugnaa inuu jiro maamule awood badan oo dusha ka maamulaya kuwa leh waxbaanu maamulaa ee horteena kamuuqda.
Caalamkan aynu kunoolahay waxaa ka socda hardan aan horay loo arag oo kusalaysan daamlim horor ah iyo madluum mintidaya. Meelo badan waxaa kasocda xaalad noocaas ah, balse dalka Ogadenya wuxuu kaga duwan yahay waxaas oo dhan wuu kagu waynyahay. Sidoo kale waxaa garab socda halgamadaas isbadalo waa wayn oo iyaguna ku dhacaya si lama filaan ah.
Waxaa la ogyahay inay Geeska Afrika kajiri jirtay Imiraadooriyad la odhan jiray Abasiiniya oo ay daba karriixayeen quwado shisheeye taasina waxay sahashay inay xoog ku qabsadaan qowmiyado farabadan oo gobolka kunoolaa. Waxaa kamid ah qowmiyadaha waqtigaas laqabsaday- Eriteriya, Oromiya, Gambella, binishaangul, cafar iyo umada soomaalida ah.Dabcan waa inta ugu tunka rooneyd balse kuwo kalana way jiri karaan.
Qowmiyadaha gardardaas liqi waayay ee dagaalka kala horyimid abasiiniya waxaa safka hore kagalay umadda soomaaliyeed iyo Eriteriyiinta. Waxay lagaleen kuwii soo duulay dagaalo ayna jirin wax naxariis ah oo la isu galayo. Sidaad lasocotaan labadii Qowmiyadood waxaa hor guulaystay Eriteriyiinta, waxaana sababay waxaa si buuxda gacantooda ugu jiray maamulka halgankooda, meesha umadda soomaaliyeed talada halganka loo hayay. Nasiibka noocaas ah ayay ku kala hormareen mooyee xaga halganka waxaa ku horeeyay umadda soomaaliyeed ee guumaysidiidnimada abka iyo isirka uleh.
Aan hoos usii degee, ugu dambayn waxaa la wareegay taladii dalka Qabiilka taloxume ee Tigreega blasé huwan magaca TPLF. Waxay si qaldan u isticmaaleen dhaqaalihii dalka iyo kii loo dawarayba iyagoo ku qortay Maleeshiyo kala duduwan oo wax magarato madax looga sii dhigay, kadibna dadyowgii ayay ku xasuuqeen!. Qowmiyadda soomaalida Ogadenya oo iyadu ka aragti dheerayd kuwa kale ayaan marna kadaalin inay karaamadooda difaacayaan umadaha kalana ugu baaqayaan inay fadhiga kakacaan. 25 sano kadib markii tuule walba gaar loo ciqaabay ayay guud ahaan hurdada kawada tooseen qowmiyadihii mudada dheer dhabacanayay. Kacdoon 3 sano socday kadib waxaa ciidda afka loo daray hogaamintii tigreega oo dadka qaarkood ugu yeedhaan Woyaane.
Baraaruga qowmiyaduhu wuxuu horseeday in si lama filaan ah uu ula wareegay hogaanka wadanaka nin layidhaaho Abiy Axmed oo kasoo jeeda qowmiyadda ugu tirada badan ee Oromada, balse waligood xukunka laga ilaalinayay. Ninkaas oo sida muuqata Dhari karkaraya madaxa loo galiyay ayaan doonayaa inaan ka dhiibto aragtidayda iyo siduu iila muuqdo mustaqbalka dhow ee guumaystaha Itoobiya anigoo ku xisaabtamaya inay aqooyano badani hortay falanqeeyeen.
R-Wasaaraha cusub ee itoobiya Abiy Ahmed waa nin aad xogogaal ugu ah siyaasadda dalka oo dhan, waa nin ka warqaba baaxadda uu leeyahay xasuuqa uu gaystay Ururka EPRDF ee isagu kamidka yahay. Waa nin si hoose ula socda waxa ay qowmiyaduhu tabanayaan. Wuxuu sidoo kale aad ula socdaa macangagnimad saraakiil kusheega woyaanaha. Markii aan soo koobana kollay lama odhan karo falkii xun ee uu layimaado jahli baa ugeeyay.
Anigoo ka eegaya dhinaca wanaagsan iyo haduu doonayo inuu isbadal dhab ah sameeyo waxaa lagama maarmaan ah inuu ubato dhanka shucuubta dulman iyo ururadooda hubaysan. Markaan sidaa leeyahay waa mar uu iska kala shaandheeyay ciidamada iyo siyaasiyiinta dalka xoogga ku haysata. Noloshii shaqsiga muwaadinka ah ayaa 24ka saac halis kujirta waxayna u baahantahay in laga bixiyo jawaab dhab ah sidii loo badbaadin lahaa. Haduu intaa sameeyo wuxuu soo hooyin doonaa guulo taariikhi ah mustaqbalka dhow ee wadankuna waa Shultii aan sheegay oo waxaa loo jaheeyay meel nafci leh.
Hadaan ka eego dhanka kale iyo inuu wado munaafaqnimo waxay noqon kartaa inuu meesha utagay Kursi jacayl iyo inuu dhoobada kasaaro Woyaanaha. Haday taasi uqarsoontahay oo uu yidhaaho balaayooy buulkayga kaa galay waxaa kahor iman doona arimahan soo socda.1- in dadwaynuhu kacdoonkii dib ubilaabaan. 2- Ururadii hubaysnaa oo kuqaada gulufyo colaadeed oo cusub iyagoo kaashanaya shucuubta. 3- In xidhiidhkii iyaga iyo reer galbeedku mugdi sii galo. 4- In dhaqaalihii lasiin jiray uu sii yaraado. Markay xaaladu halkaa mareyso laba dariiq midkood ayuu qaadayaa. Kan hore inuu is casilo oo uu dadka iyo wayaanaha ukala dhexbaxo iyo inuu askarta dhiig yacabka ah lasafto oo xaalku noqdo Shaltii aan sheegay wadakiina ujihaysto meel abaar ah. Sikasataba ha ahaatee iima muuqato xaalad sadexaad oo wadankani mudan doono.
Ugu dambayn isku soo wada duuboo hogaamiyaasha xaq udirirka ee matala qowmiyadaha kala duwan waxaa la gudboon inay xoojiyaan hawlahooda halgameed ilaa inta laga helayo wax lataaban karo oo uqalma wixii hubka loo qaaday.